Yintoni ubomi Good? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kwafuneka iingoma azithandayo ezifana "Imali asilizwi,"Yaye mna ukuphulaphula albums izibizo ezifana" Fumana oluTyebileyo okanye Die Ukuzama. "Ngoko ngokwenene akumangalisi ukuba ingcamango kwam ubomi elungileyo ukuba isipaji ukuze wafaka ukuba engathandi kufutshane. Oku akuthethi zonke imali, nangona. Ndifundile Hedonism, nomntu ongathandani naye, eziphathekayo, ayenze, ubuvila, iziyobisi, nokufumana imbeko - wonke njengoko pieces kwiphazili ukuba ubomi entle.
Kwaye ngxaki iphambili ngomfanekiso Ndinaso obu bomi entle kukuba ezisembindini kum. Oko konke ngam. njani ukufumana imali? njani ukufumana malunga? njani ukufumana iwonga? njani ndicole ihlabathi? Oko bendimamele ukuba bayadla babeligquba ubuxoki. Kwaye xa abantu abaselula uvula irediyo, Nangona kukho kakhulu hip-hop kulungile, gqitha kuyo izele ubuxoki yintoni ngokwenene ubomi elungileyo.
Musa kakubi nangona. Hip-hop umculo asinguye ngxaki. Ezo ubuxoki kuxhokonxwa. Isizathu ndisile kwi hip-hop kukuba oko inkcubeko yam nezinto zokwenene. Ndikwazi wacaphukela hip-hop, kodwa nangoku belifanele Wondla ezo ubuxoki ngqo efanayo komnye umntu. Kwaye yam iziqu, watya intliziyo nozuko-abalambileyo nabo.
Kodwa xa ndadibana uYesu yonke into yatshintsha. Mna langutane umfanekiso omtsha zehlabathi umfanekiso omtsha ubomi. Kwaye ngoko ke ndizama entsha uku bana phandle ukuba siphile ubomi ngokupheleleyo. Ndandingafuni ukuba ukuphila ubomi ngenxa ubuxoki kwakhona. Ndandifuna inyaniso.
Ukuba siqhubeka ukukholelwa ubuxoki ngaye kufuneka siphile ngendlela, ziphumo ezikhoyo ezinkulu. Asiyi nje kuphila ezinye khetho; siya kuba siphila ngendlela Sadalwa ukuba. Siza kungachitha ubomi bethu emsukela into Akukhathaliseki. Siza kuphoswa umfanekiso omkhulu. Asiyi kufumana uvuyo lokwenene nolwaneliseko. Asiyi saphila sadalwa ukuba baphile. Siya kuphila ubomi elungileyo.
Kunjalo iSibhalo akazange isebenzisa igama elithi "ubomi kulungile." Kodwa ke xa sisithi 'ubomi ezilungileyo "sidla sithetha abafa- ubomi sikwazi ukuphila. Ngoko ndifuna ukufumana oko uhlobo ifanelekileyo yokuphila lweBhayibhile. Ndifuna ukuba ukuphila ngendlela sadalwa ukuba baphile. Ngoko ndifuna ukuba sijonge izinto ezintathu ubomi elungileyo.
mna. Ubomi oluncomekayo siphila ngokuba nokholo kuThixo Good
Kwincwadi leyo mna ukuba uchaze ubomi elungileyo. Ukuphila ngokholo kuThixo kulungile. Kwaye makhe ndinibalisele ukuba kwakutheni.
SONKE SIPHILA NGOKHOLO
Enoba bayayiqonda lo nto okanye hayi, sonke abantu ukholo. Wonke umntu. amaKristu, amaSilamsi, amaHindu, amaBhuda, kubukho, Kubukho - sonke ndibudla ngokholo, sihlala ekukhanyeni koko bakholelwa nangawuphi na umzuzu. Abo nina kwiimbaleki ukuzilolonga ngokuzimisela ngokwenene. Ngoba? Kuba ukholelwa ukuba uya kwenza ngcono wena emidlalweni yakho (ngaphandle kwakho kum ekhula ibhola yomnyazi kwaye nangoku ezimbi ngokwenene). Okanye njani le. Abanye kuni makabeke idilesi kwiiMephu Google ukufumana apha namhlanje. Ngoba? Ngokuba nakholwa ukuba ifowuni yakho iza kukunika imiyalelo ekunene. Ukuba uthe wakholwa, ifowuni yakho iza kuqhatha ukuba, leyo ndicinga am amaxesha, ninge wayisebenzisa. Ndingaya ngomhla kunye. Kodwa sonke ubomi ngokholo.
Ndiya kuthetha ngayo oku kwincwadi. Ndiyavuya ezimbi ngenene imiyalelo. Umfazi wam gqolo kumangaliswa yindlela sisidenge ndinawe imiyalelo. Ngenye imini ndaya amngenisa ibe kweemoto ukuba nijike, kodwa emva koko ndabuyela phandle ngendlela efanayo. embi ngokwenene. Bekuya kuba sisidenge kakhulu ukuba bandithembe ukuba akhokele. Ngokufanayo, sonke ziwile. iintliziyo zethu basikhokele kwicala elingelilo. UMtyholi ukusondla ubuxoki, ihlabathi isasaze kubo, kwaye iintliziyo zethu kubadla. Ngoko kunokuba sivumele iintliziyo zethu ukuba asikhokele, kufuneka siphile ngokholo enyanisweni.
Yaye lowo ingcono isixelela ngendlela ngcono ukuphila obu bomi uThixo ngokwakhe. Asazi nje kwabathembele kuye ukuba bayeke imikhondo evela eZulwini; sijonga oko sele wathi. ingxaki yethu sinokuyikholelwa ubuxoki yotshaba phezu inyaniso kaThixo.
UThixo wadala uAdam noEva. Wabanika imiyalelo ukuba baphile ngendlela. Uthe ke babenokutya kuyo yonke imithi, ngaphandle umthi wokwazi okulungileyo nokubi.
Ke kaloku inyoka yaye inobuqhophololo ngaphezu kwazo naziphi na ezinye izinto eziphilileyo zasendle, ukuba uYehova uThixo. Wathi kumfazi, "Ngaba ngokwenene uThixo uthi, Ndisithi, Ize ningadli kuyo yonke imithi kwi garden'?"Waza ke umfazi wathi kwinyoka, "Thina makangazidli Kwiziqhamo zemithi yomyezo, kodwa uThixo wathi, Ndisithi, Akuyi kudla iziqhamo imithi phakathi yomyezo, Ezikumkanini aya ningazichukumisi, hleze die.' "Kodwa wathi umfazi inyoka, "Ngokuqinisekileyo uya kufa. Kuba uThixo uyazi ukuba xa nizityileyo iziqhamo zawo novuleka amehlo enu, kwaye uya kuba uThixo, nazi okulungileyo nokubi. "Ngoko xa umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa, kwaye yaba uyakhanukeka emehlweni, nokuba ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa omnye, onqwenelekela ukuqiqisa, wathabatha eziqhameni zawo, wadla, waza wanika nendoda yakhe owayekunye naye, waza wadla. (Genesis 3:1-6 yesiXhosa)
UAdam noEva bakholwa ubuxoki yenyoka phezu inyaniso kaThixo. Le ngxaki yethu ephambili kwakunye. Sikholelwa ihlabathi xa bathe batsho kuthi ukuba kukho into ebhetele ukuze anikele ngaphezu koThixo. Sikholelwa inyama yethu xa isixelela ukuba sijonge ukuba website. Sikholelwa uMtyholi xa esithi sibe kwiziko iphela. Sikholelwa ezo ubuxoki endaweni yenyaniso kaThixo. Kwaye yilonto ogcina nobomi kulungile kuthi.
Ubomi olungileyo iqala xa wabuya ezonweni zethu, sagqiba ukushiya ngasemva bonke ngokungathobeli yethu, kwaye sibeka ukholo lwethu kuYesu. Loko a ubomi buqala. Kodwa ngaba kuphelele apho ukholo lwethu. Simele silwe ngemihla ukuqhubeka ukuba uthembe uThixo nikholwe kuye phezu ubuxoki yotshaba.
Ukholo yenye KWIDABI ngemihla
Ndiyazi umoni kuphela apha ngokuhlwanje andifuni. Yaye ngokufuthi sicinga xa sisona, nto nje kuba le yobuthathaka. Kodwa ukuba akukho ibali lonke. Zonke iingxaki isono yingxaki ukholo. Sone na, kuba engakholwa. Sikholelwa ubuxoki utshaba nokuthobela kubo kunokuba inyaniso kaThixo.
Ngoko xa singamthobeli igunya, kungenxa sinokuyikholelwa ubuxoki ukuba igunya ukuba kusenzakalisa ukusinceda. Kwaye kuba anikholwa uThixo xa athi Wabeka igunya endaweni okusilungeleyo. Kwaye xa ngesondo ngaphambi komtshato, kungenxa sikholelwa ubuxoki, ukuba yiloo ndlela siziyolise size. Kwaye kuba anikholwa uThixo xa Uthi ngesondo izibini ezitshatileyo, kwaye oko imeko apho Bonakalisa gqitha.
KwabaseRoma 1, UPawulos uthi va ukusebenza ukuzisa "ukulululamela ukholo" - ukulululamela aqukuqela nokholo kuYesu. Ngoko njani silwela ukholo? Njani sondla ukholo lwethu?
KUFUNEKA ILIZWI LIKATHIXO
KwabaseRoma 10 uthi, "Ukholo luza ngokuva, kwaye ukuva ngalo ilizwi kaKristu. "
ubomi bethu ngokomoya iqala ukholo iLizwi, koko siyaqhuba singaphazamisekanga efanayo. Kodwa yonke imihla siya kuzele ngobuxoki evela ehlabathini, inyama, kunye nelungelo umtyholi? Njani ukulwa ubuxoki? inyaniso! Ngoko nantsi umzekelo indlela yokusebenzisa iLizwi likaThixo. Yonke imihla siva imiyalezo ngesini, Sibona imifanekiso abangcolileyo, kwaye iintliziyo zethu yesono sinqwenela ukuba nikholwe abo ubuxoki. Ngoko ke masilwe nabo ubuxoki nenyaniso. ILizwi likaThixo lithi okubi ngokwesini?
Kuba oku kukuthanda kukaThixo, ukungcwaliswa kwenu: ukuba nikhumke kulo uhenyuzo; ukuba elowo kuni akwazi ukulawula indlela umzimba wakhe ubungcwele nembeko, angathabatheki yinkanuko lo njengâbo bangamaziyo uThixo. (1 kwabaseTesalonika 4:3-5 yesiXhosa)
Sifana imoto. Sileqa ngaphandle ngemihla igesi. Ukuba siqhubeke sihamba ngokholo, kufuneka amafutha. Ezinokuphembelela iLizwi likaThixo. Ukuba awunalo ukuba amafutha asiyi kuqhubeka ukuba ungamthemba. Ukuba kuthi ukuba ngaba sifunda iLizwi imini enye siyakuba kubukho xa uvuka. Kodwa xa ndikunye na iLizwi, Ndiziva ngayo. Ndiziva kukungeva ixe- ukholo kwiinkalo ezahlukahlukeneyo zobomi bam.
Kwaye musani ukulwa nokholo kwiLizwi kuphela. Sifuna abantu bakaThixo.
Siyanivuselela omnye komnye yonke imihla, ixesha elide kangangoko kusathiwa "namhlanje,'Ukuba kungabikho mntu kuni wenziwa lukhuni kukulukuhla kwesono. (Hebhere 3:13 yesiXhosa)
Kuba abo kuthi kweli gumbi ngokuhlwanje bakholwayo, ziziphi ubudlelwane bakho kunye namanye amaKristu? Ngaba uye nje ecaweni okanye ngaba uchitha ixesha ezilungileyo kwabanye? Kufuneka ukuba sihambe ngqo kunye namanye amaKristu. Kufuneka ukuba sibe nolwalamano olusenyongweni. Kufuneka bethandana lokuphendula. Xa uthandana umfazi wam, into sikhulu abantu ebomini bam bebambe ukuba kwimida yethu uxanduva.
Ukuba ubukhe ukholo lwenu kuKristu, awuzukuba sinokunikezela. Wena zikhululwe ukuba. Kwaye xa uhambe kuloo inkululeko, uya kukwazi ukunandipha ubomi njengoko wayemiselwe babuxhamle. Uya kukwazi ukuphila ngendlela sadalwa ukuba baphile.
Ngoko silwela ukholo, kodwa yintoni abathobelayo, othembekileyo ubomi Jonga ezifana? Ntoni kubonakale ngathi xa siphila ngokukholwa kuThixo kulungile?
II. Ubomi Good yakhiwe uYesu
Kwakukho izinto ndifunda ekuqaleni njengomKristu ukuba sadilizwa umfanekiso wam omdala ubomi elungileyo. Nantsi umzekelo.
Sonke ndikuvile abantu athethe ngokufa ixesha nexesha. Thina ndikhe ndeva abantu besithi, "Akukho nto ebomini ukuba kukufa nokuhlawula irhafu." Omnye wathi rapper ethandwayo, "Ndizama ukuba ukubetha ubomi kuba andikwazi ukukopa ukufa." Abantu baqonde ukuba ukufa kunako ukuphetshwa. Kodwa ngumKristu oselula, Ndafunda indinyana ngokufa eBhayibhileni ukuba zinjengento engento endakha ndeva phambi. Umpostile uPawulos wathetha ngokufa ngendlela engaqhelekanga. UPawulos akazange athi wayeza kufa, wayithabatha elinye inyathelo. Uthe, "Ukufa kuyinzuzo." Yintoni!?
Ukufa xa ingqondo yakho, intliziyo yakho, kunye nemiphunga yakho uyeke ukwenza umsebenzi wabo. Ukufa kuthetha isiphelo sobomi bohlukaniswe namalungu osapho. Ukufa kuthetha umsebenzi ubomi sakho phezu. Ngokungafaniyo nezinye izilingo, ukufa, ngokuba umntu esifa, ngokoqobo "isiphelo sehlabathi" - ekupheleni kwale omnye kakade. Ngoko njani mhlawumbi ukufa kuba inzuzo? Andikwazi ukwenza imali xa ndifile? Andikwazi ukwandisa iwonga lam xa ndifile. Oku nje akazange ukungena kunye iimbono zam ubomi elungileyo.
Kakuhle ukuze kum ukuqonda ukuba uPawulos wayethetha la mazwi mane - "ukufa kuyinzuzo" - Kwafuneka ukuqonda ezine weza kanye phambi kwabo. kwi Filipi 1 UPawulos ucacisa ukuba kutheni kubonakala ukuba KULUNGILE kunye nokuba ukuhlala bephila okanye bafe ezandleni babemtshutshisa. Ubhala kwivesi 21, "Ukuphila na Kristu. "Ngaloo mazwi, umpostile wandixelela ukuba ubomi ngokwenene konke malunga - imali, Asiyombopheleleko yam, nkqu nentsapho - kodwa uYesu. unako-iziqu ukuzeyisa Indlela yam, isimo-phithi, osimo kusinda ecaleni ukuba inyaniso?
Ndiye ndaphawula ukuba abadlali eziphumeleleyo kuwo nawuphi na umdlalo, neentshatsheli, bonke unento efanayo. Baye phithi ngokuphumelela. Enamatheleyo yabo, lo mnqweno onzulu ukuphumelela, Amaxilongo zonke ezinye iminqweno yabo emdlalweni. Ngoko ke awunguye belujongene ikakhulu ngezithwaselo, okanye ukwenza i bhobhile kubalaselisa, okanye kwizikhuseli stats zabo. Ngokuqinisekileyo ukuba bacinga ntoni ngaloo nto, kodwa ekupheleni kosuku, ukuba akukho nto badlalela. Badlala ukuphumelela. Ngoko ukuba babe nethuba lokuba uza kubanceda, kodwa iqela, begqitha. Kunoko bafuna ukuba uphumelele.
Kulungile oko kunye imidlalo zemidlalo. Makhe sicinge ngobomi. ebomini, loo nto uPawulos tii. Loo mnqweno ukuba imidla yexesha zonke ezinye iminqweno. Loo nkanuko luthathe ezinye iinkanuko bakhe uKristu. Yinto ukuba uluthiyile ubomi, okanye usapho, okanye izinto; nto nje imbeko uYesu uphakeme. Ukuba yeyona nto ephambili. Kwaye kuyacaca ukususela oko ubhala esi sicatshulwa.
UPawulos uthi kwi Filipi 1, ukuba akwazi ukuphila okanye ukufa; kwaye usaya omhle kuba uYesu iyakwenziwa. vesi 21 isixelela ukuba kutheni. Uyayiqonda into. Ukuphila nguKristu. Ubomi nguKristu. Sadalwa nguYesu kuba uYesu. UYesu nenceba boMsindisi wema endaweni yethu kwaye inika ubomi obutsha. UYesu ungumlamleli yethu phambi uBawo. UYesu umele abe izizathu zonke izigqibo zethu. UYesu kufuneka amandla ukuqhuba emva yonk yethu. Yinto ZONKE ngoYesu. Akukho ubomi elungileyo ngaphandle kukaYesu, kuba ngaphandle uYesu ubomi akukho ntsingiselo. Ukuphila nguKristu.
Ubomi bakho akukho malunga nawe, kodwa uYesu. Ngoko oku kuyitshintsha indlela sibona yonke.
Kuthekani amaphupha ethu kunye neenjongo? Kufuneka ube namaphupha amakhulu kunye neenjongo ezinkulu, kodwa kufuneka eyayisekelwe kuYesu. Sadalwa ukuba ukuphila ngendlela ebonisa kuye ukuba ungubani na. UPawulos uthi kwi Filipi 1 yokuba ukuba ubomi ndisenyameni kuthetha kusisiqhamo somsebenzi kuye.
Bosebenzayo FOR UYESU
Oko kundikhumbuza ibali funny. Ngaxeshanye, Mna eDallas mna ndaya komnye amabala zam endizithandayo fried chicken, EQonce Chicken. Le nkonzo usoloko amanwele, kodwa Inkuku kakuhle. Drive ngokusebenzisa inkonzo olubi, kodwa ke ukuya ngaphambili. Nguye phaya emva ukuthetha ndize ingqalelo yakhe. Kwaye uthi, "Owu, embi yam Ndilibele ngawe bhuti. "uthetha ukuthini ukuba ulibele? Wena emsebenzini! Yiloo nto ntoni emsebenzini. Njani ulibale ukusebenza? Yena waphazamiseka.
Ngokufanayo nangona, thina baphazanyiswa lula. Silibale ukuba simane apha ukwenza. Kwaye ukuba bayayithanda niyancedisa kuye, ukuze zonke izinto abengezelayo elimiweyo walinikela ukutsala nathi kude.
Nisebenze ngenxa kaKristu akuthethi sonke kufuneka ukuba abashumayeli. Sifuna amagqwetha, Rappers, oonobhala, kubalungiseleli, kunye nabaphathi ezingoovimba abamthandayo uYesu. Ngoko ke oko akuthethi ukuba simele siye sonke ukutshintsha into ntoni okanye bafuna ukwenza, nakuba mhlawumbi uya. Oko ngenene kuthetha na, kufuneka bawuqhele oko isibizele uThixo ukuba enze amakholwa, owuvayo ukuba asebenze njani ngaphandle kwiimeko zethu eyodwa. Oku kubukeka ezahlukileyo ebomini ezahlukeneyo, kodwa thina esinokuyenza ukuze uzuko lwakhe.
Ndiyazi abanye abashumayeli ukusebenzisa iindinyana engalunganga, ukusiqinisekisa ukuba akukho izilingo. Ngenxa yabo ubomi ezilungileyo kuthi uKristu ubomi kungekho naziphi na izilingo ngoku. Ndinokuzenza izinto zonke - oku kuthetha? Ukuba nangona ndiwanye e yomnyazi, ngoKristu mna kuba ngoknba zonke-star? Hayi, UPawulos wayesithi ukuba mna usisityebi okanye ulihlwempu, Ndanelisekile. Ngenxa yokuba uKristu.
UThixo akanjalo ezinye oomama bethu basemhlabeni nootata abaya kuba akayi kwamkela ukuba sibe hayi ngaphezulu esiphezulu. UThixo akalindelanga ukuba isimo, yena ofuna ukuthembeka.
Ndicela umngeni xa mazwi kaPawulos Masifunde, ingakumbi xa sicinga meko kaPawulos. UPawulos phakathi njengemeko iyoyikeka. Kodwa ilens ubona oko kutshintsha yonke. Ukuphila uKristu ilens ubona ityala bakhe.
Maxa wambi siye ukumgibisela kufanelekile njengomntwana phakathi izilingo, kuba sicinga zonke iimeko ngathi. Sicinga kwaye ukhalaze nabahlobo bethu, ngendlela olunesheyi ngayo, kwaye ukuba kunzima kangakanani na. Sizilahla aziintanga umntwana ngumsindo kuba sicinga iimeko zethu ozizisela malunga azifu- kuthi. Kodwa awunguye. Bona ngoYesu. Sasidla kuzamana ngokusebenzisa iimvavanyo ngokwahlukileyo, ukuba kunokunikela ingqalelo ngendlela engathandekiyo thina siya kugxininisa ukuhlonela uYesu phakathi njani. Nantso ubomi elungileyo.
Ngaba ubomi bakho ngeenxa uYesu wayethetha ukuba ukuba itya okanye ngaphandle novuyo? Akunjalongo noko. Ndiyazi ubuxoki inokubonakala nomtsalane amaxesha, kodwa inyaniso ukuba umthintele. Loo nto nesihlumo asezantsi kakhulu. Ukulandela uYesu oko akuthethi okokuba musa sinandipha izinto, nje ithetha siyayonwabela kunene. Endaweni ekhokelela ntlungu akhokelela uvuyo.
Yonke into bhetele xa bawafumana kwimeko yayilusuku. Ubuhlobo mnandi ngakumbi xa wakha ngeenxa zonke kuye. abantu ababini kuxolelwa ukuxolelana, leyo yenza ubuhlobo enencasa. Unakho ukukhululwa ukuya ukunandipha imali, xa aniyenzanga loo nto.
Uvuyo buphele. Abo ukwakha ubomi babo abangento azenze intshabalalo. Kodwa abo ukwakha ubomi babo Kristu konakala naphakade. Ku sisipho esivela kuThixo kwaye ngeke kuhluthwa.
Ngoko ke ezinye iinkcukacha ngale ubomi obulungileyo, kodwa ivela phi? Sazi njani ukuba oko?
III. Ubomi Okulungileyo Isipho Esivela KuThixo Onothando
UThixo ufuna ukuba uphile ubomi elungileyo. Wadala ukuba uphile ubomi elungileyo. isono sethu nto ndazigcina kulo kuthi. Ubuxoki ukuba uye waxelelwa ukuba uThixo ufuna ukugcina nobomi kulungile kuthi. Kanye Ufuna ukuba uxinezelekile uyaphoswa lonke uvuyo. Kodwa Maxa.
Usithande kangaka ukuba nangona sonile yaye bahlulwa kuye, Wathumela uYesu ukuze sikwazi ukuba kube. Siye anqamka kuThixo, umthombo yonke elungileyo.
Kwakukho iyantlukwano ezininzi phakathi umfanekiso ngobomi elungileyo ndafunda kuPawulos, kunye nomfanekiso ndafunda ukusuka kwinkcubeko. Kodwa omnye umahluko omkhulu yindlela sifike khona. Ihlabathi wathengisa sibe 'ubomi olungileyo' ukuba kufuneka afumane. Kwaye abanye abo basebenza kunzima ukufikelela kuyo, ukuba uhlala apho ingenakufikelelwa. Kodwa umfanekiso yebhayibhile 'ubomi ezilungileyo "eyahlukileyo. Yinto kunjengesipho sesisa oko kufumaneka kuzo zonke.
Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo. Kwaye oko kungaphumi kuni; sisipho sikaThixo, hayi ngenxa yemisebenzi, ukuze kungabikho namnye unokuqhayisa. (Efese 2:8-9 yesiXhosa)
kuYohane 11, uYesu uthi, "Ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum, nokuba ubethe wafa, wodla ubomi, kwaye bonke ubomi ekholwa kum uya kufa naphakade. "Loo ziindaba ezilungileyo.
Ukukholosa UYesu uthetha nathi kubuyiselwa kuThixo, leyo iindaba emangalisayo kuba kwenziwa ukuba uThixo. Sifumana ukunandipha kuye ngoku iLizwi laKhe. Singathanda ukubukela ezemidlalo, kunye nentsebenzo kakhulu kuba sinandipha ubukhulu. Akukho ubukhulu mkhulu uThixo wabadalayo. ubukhulu bakhe yenza zezabo khangela inemfesane.
Le nto uPawulos wathi "ukufa kuyinzuzo,"Kuba ukuba wafa okanye wahlala, UYesu iyakwenziwa. Ubomi kuthetha ukhwela ukukhonza uYesu ukufa kuthetha yena oba noYesu - kwaye ke kukho ndawo Ndingathanda kunokuba abe (Filipi 1:23). Singafunda uPawulos apha. Inyaniso, ukuba kungcono elibala amahlwempu ebusweni bukaYesu kunokuba ezingcolileyo zizityebi emehlweni abantu.
Ngaba elide ukuba noYesu? Siya kuze akwazi ukuthi ukufa kuyinzuzo, ngokwenene de siyamthanda uYesu. Ngaba umthanda ngaphezu obu bomi? iNdumiso 73. Indlela kuphela ukuba kukho ngokuyijonga kuYe ngeLizwi lakhe, babuya e izinto angenzi umbono wakho. Abanye bethu uyazibuza ukuba kutheni ndinganithandi uYesu, kodwa sibambelela izinto sihlale ukusuka sisondele kuye. Jika ugidime kuye. Nako oku umlo ukholo.
Singakwazi ukuphila ngendlela sadalwa ukuba baphile.
Ukuba andithanga babone kraca umfanekiso omtsha ubomi olungileyo ange Ndidlale ubomi bam kukusukelana into Akukhathaliseki. Ke ngobabalo lukaThixo wabonisa loo mazwi mane kum: ukuba ubomi kunguKristu. Kwaye wanika mna ubabalo ubomi ngokholo kuThixo kulungile.
Yintoni entle? Ngubani ichaza kakuhle? uThixo. Good uzukisa uYesu ukuba kunye naYe. Logama nje bakholwa ubuxoki inkcubeko wandixelela, Nda ndi ngahlali ubomi elungileyo. Kodwa xa ndaqalisa ukuphila ngokholo kuThixo kulungile, ubomi bam ezilungileyo. Ndaqalisa ukubona ubomi elungileyo ubomi ehlaziyeka uYesu, iqhutywa uYesu, kwaye wahlala ukuba kuzukiswe uYesu. Umntu ohlala yena ufumana nto elide kobu bomi, kwaye uya kufumana kuphela ilahleko etshabalalisayo elilandelayo. Ke umntu ophila Kristu ufumana bangcamla ubomi entle ngoku, nokufa kwakhe kuzisa kuphela into Esinqwenelela ezininzi.
sheyi • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 11:39 pm • impendulo
Eyona ntsikelelo kakhulu oku aye wandlisikelela. UNdikhoyo waphendula nje imithandazo yam. Amen
Bman • EyeNkanga 15, 2013 ngexesha 2:00 mna • impendulo
Oku ngokwenene ibe Kuhle ukubona .thnx